शास्त्र अनुसार कस्ता ब्यक्तिलाई अभागी भनिएको छ ? - ज्ञानविज्ञान
शास्त्र अनुसार यी तीन कुरा भएका ब्यक्तिलाई अभागी भनिएको छ ।
यसको अर्थ हो कुनै पनि पुरुषकी पत्नीको मृत्यु भयो वा अर्कैसँग गइ भने यो दुर्भाग्यको कुरा हो । यदि यौवनावस्थामा नै जीवन साथीको साथ छुट्छ भने यस्ता पुरुषले त पुनः विवाह गर्न सक्लान तर अलिक उमेर गएपछि यस्तो हुनु सबैभन्दा दुखःद हुन्छ ।
लोग्ने मानिसको जीवनमा वृद्धावस्थामा पत्निको साथ सबैभन्दा बढि महत्वपूर्ण मानिएको छ । बुढेसकालमा एक्लो हुनु निराशा र दिक्दारीको कारण बन्छ । यसैले यस्ता पुरुषलाई अभागी भनिएको छ ।
कुनै पनि पुरुषको लागि अरुको घरमा बस्न पर्नु वा अझ गुलामी गर्न पर्नु सबैभन्दा दुखको कुरा हो । यस्ता पुरुषलाई पनि चाणक्यले अभागी भनेका छन् । यस्ता ब्यक्तिलाई कुनै पनि काम गर्दा अर्कैको आदेश पर्खिनु पर्छ ।
गुलाम बनेर वा अर्काको घरमा बस्ने पुरुषको स्वतन्त्रता भन्ने चिज नै हुँदैन । यस्तो ब्यक्ति तन मनले दुःखी हुने भएका कारण पक्का अभागी भएको चाणक्यको भनाइ छ । अतः कुनै पनि पुरुषले आफूलाई यी तीन अवस्थाबाट जोगाउने प्रयास गर्नु पर्छ ।
Topics #चाणक्य नीति #पुरुस
Don't Miss it दसैँमा ​कस्तो खसीको मासु खाने ?
Up Next नियमित मन्दिर जानुहोस्, यस्ता घातक रोगबाट बचिनेछ
कानेगुजीले बताउँछ स्वास्थ्य समस्याको बारेमा
१. कानेगुजी पहेंलो, हरियो, कालो वा सेतो भयो भने तपाईंको कानमा संक्रमण भएछ भनेर बुझ्नूपर्छ । कानेगुजीको प्राकृतिक रंग हल्का…
गर्मीमा शितलता प्रदान गर्ने लस्सी पिउँदा हुन्छन् यस्ता फाइदा जानिराख्नुहाेस्
गर्मी मौसममा मानब शरीरलाई अत्यधिक मात्रामा पानी चाहिने हुन्छ । धेरै जसो मान्छेले पानीलाई साधा पिउन रुचाउँछन् । तर, कोही…
दातँ सफा बनाउने सरल तरिका, यस्ता छन्
१. कागतीको प्रयोग: कागती दाँतको जीवाणुहरूलाइ मार्न र दाँतलाई सफा गर्न धेरै नै प्रभावकारी छ। खाना खाएपछि कागतीले दाँत सफा…
यस्ता छन्, कुहिनो र घुँडामा हुने कालोपन हटाउने घरेलु उपाय
नौनी र बेसारको धुलो मिसाउनुस । त्यसबाट बनेको लेप कुहिना र घुँडामा राम्ररी लगाउनुस् । बेसारमा बीचिंगको गुण हुन्छ ।…